Muxuu yahay dambiga loo haysto eedeysanaha ay raadinayaan BOOLISKA? - Wardeeq 24 TV Muxuu yahay dambiga loo haysto eedeysanaha ay raadinayaan BOOLISKA? Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Muxuu yahay dambiga loo haysto eedeysanaha ay raadinayaan BOOLISKA?
Muxuu yahay dambiga loo haysto eedeysanaha ay raadinayaan BOOLISKA?
Booliska Soomaaliya ayaa billaabay baadi goobka eedeysane la sheegay inuu baxsad ka yahay gacanta Booliska kaasoo loo heysto dambi dil ah, sida ay ogaatay wardeeq news
Booliska ma sheegin dambiga uu galay eedeysane Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan, hase yeeshee wardeeq news ayaa ogaatay in lagu tuhmayo dil ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana baadi goobkiissa lagu faafiyey dhammaan warbaahinta Dowladda iyo baraha Bulshada.
Previous articleHaweeney lagu dilay Degmada Balcad iyo ninkii dilay oo la qabtay
Next articleCiidamada NISA oo howlgal qorsheysan ka fuliyey Hiiraan